Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hindiya » Boeing 737 MAX ayaa loo fasaxay inay mar kale ku duusho hawada Hindiya
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Wararka Hindiya • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Illaa iyo hadda, 175 ka mid ah 195 dal ayaa xayiraaddii ka qaaday Max, in ka badan 30 hawlwadeenna ayaa diyaaradda ku soo celiyey adeeg.
Hay'adda maamusha duulista rayidka ee Hindiya ayaa dhulka soo dhigtay Boeing 737 MAX.
SpiceJet waxay filaysaa inay bilawdo hawlgalka Boeing 737 MAX bisha soo socota.
Hindiya ayaa joojisay diyaaradaha 737 MAX 13 -kii Maarso, 2019.
Hay'adda maamusha duulista rayidka ee Hindiya ayaa maanta ku dhawaaqday in diyaaradaha Boeing 737 MAX loo oggolaaday inay mar kale ka howlgalaan hawada Hindiya.
Dhammaan diyaaradaha Boeing 737 MAX waxaa la joojiyay caalamka bishii Maarj 2019 kadib laba shil oo dhacay 5 bilood gudahood.
Hindiya ayaa ka mamnuucday dhammaan diyaaradaha MAX inay u duusho, ka soo gasho, gudaha iyo hawada hawada Hindiya 13 -ka Maarso, 2019.
Dhawaan, diyaaradahan waxaa loo oggolaaday inay mar kale duusho maamulayaasha duulimaadyada rayidka ee Mareykanka, EU, UAE iyo dalal kale - ka dib markii ay fuliyeen wax ka beddelkii badbaadada ee loo baahnaa oo ay soo mareen qalabkii loo baahnaa iyo cusboonaysiinta software -ka ee amniga.
Shirkadda SpiceJet Ltd ee Hindiya ayaa sheegtay Khamiista inay filayso in Boeing Co ee dhulka ku jira ee 737 MAX ee duulimaadyadeeda ay dib ugu soo laaban doonto adeegga dhammaadka Sebtember ka dib markii heshiis lala galay kireyste Avolon heshiiska kirada diyaaradda.
SpiceJet - Markab kaliya oo Hindi ah oo wata B737 Max gudaha Hindiya - ayaa heshiis la galay Avolon, oo ah kireyste weyn oo ka mid ah diyaaradaha MAX, taas oo waddada u xaareysa in diyaaradda 737 MAX ee diyaaradda ay bilowdo inay ku soo laabato adeegga… dhammaadkii Sebtember 2021, ansixinta sharciyeynta. ”
Isku soo wada duuboo, waxaa India ku sugnaa siddeed iyo toban diyaaradood oo Boeing 737 Max ah-shan hore oo Jet ah iyo 13 SpiceJet-markii la joojiyay.
Maal-qabeenka Hindiya u dhashay ee Rakesh Jhunjhunwala ayaa sidoo kale qorshaynaya inuu bilowdo diyaarad cusub oo qiimaheedu jaban yahay horraanta sannadka soo socda isagoo wata diyaaradda B737 Max. Ex-Jet Max waxaa ka soo kiraystay kiraystayaal.
Hindiya Agaasinka Guud ee Duulista Hawada (DGCA) Chief Arun Kumar ayaa soo saaray amar ah in la joojiyo joojinta B2019-737/8 MAX ee Maarso 9.
“Dib-u-celintaani waxay awood u siineysaa hawlgalinta Shirkadda Boeing Model 737-8 iyo diyaaradaha Boeing Company Model 737-9 (MAX) kaliya marka la qanciyo shuruudaha lagu dabaqi karo ee ku noqoshada adeegga,” ayuu yiri Kumar.
Horraantii bishii Abriil, DGCA waxay oggolaatay in diyaarad ka diiwaangashan dibadda oo Boeing 737 Max oo ku xayirnayd Hindiya laga dhoofiyo dalka. Waxa kale oo ay oggolaatay in uu ka badbado Max wax laga beddelay hawada Hindiya.
Intaas ka dib, qaar ka mid ah dayuuradaha diiwaangashan ee ajnabiga ah ee fadhiyay garoomada kala duwan ee Hindiya ayaa awooday inay qaadaan RTS.
Bayaan, Boeing wuxuu ku yiri: “Go’aanka DGCA waa guul muhiim u ah in si badbaado leh loogu soo celiyo 737 MAX adeegga Hindiya. Boeing waxay sii wadaysaa inay la shaqayso xeer -ilaaliyayaasha iyo macaamiisheena si ay diyaaradda ugu soo celiso adeegga adduunka oo dhan. ”
IATA: Baahida xamuulka hawada caalamiga ahi waxay ka sarreysaa awoodda
Cajiibka Thailand wuxuu u furan yahay martida 45 -kan ...
Hawaii waxay dib ugu furaysaa booqdayaasha Dalxiiska Dalxiiska iyagoo wata ...
Hagaha Dalxiiska ee Praslin waxay la Wadaagaan Walwalka Cusub Dalxiiska ...
Feeryahan Evan Holyfid: Saaxiibka Fayo-qabka Cusub Touts...